समानुपातिकमा कुन समुदाय कति प्रतिशत ? « Naya Page
समानुपातिकमा कुन समुदाय कति प्रतिशत ?
काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको मतपत्रको ढाँचा टुंगो लगाएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक मतपत्र एउटै प्रयोग गरिनेछ । समानुपातिक निर्वाचनको मतपत्रको ढाँचाअनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि देशैभरि एकै प्रकृति र प्रदेश सभाका लागि प्रदेशअनुसार दलको सहभागिताका आधारमा मतपत्र फरक हुने आयोगले जनाएको छ ।
एउटै पानामा बायाँतर्फ प्रतिनिधिसभामा भाग लिने दलको निर्वाचन चिह्न र दायाँतर्फ प्रदेश सभामा भाग लिने दलका निर्वाचन चिह्न हुनेछन् । आयोगका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उपयोग गरिने मतपत्रको ढाँचा भने प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार मनोनयनपछि टुंगो लाग्नेछ ।
समानुपातिक निर्वाचनका लागि प्रयोग गरिने मतपत्र भने दसैँअघि नै छपाइ सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक र प्रत्यक्षका मतपत्र छाप्दा समय बढी लाग्ने भएकाले समानुपातिकतर्फको मतपत्र दसैँअघि नै छपाइ सुरु भएको हो ।
मतदाता र मतदान केन्द्र थपिने
आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान केन्द्रको संख्या थपिने जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब १८ हजार मतदान केन्द्र थिए । त्यसमा १५ सयदेखि दुई हजार मतदान केन्द्र थप हुने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक करोड ४१ लाख मतदाता थिए । त्यसमा करिब १४ लाख मतदाता थपिएका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब एक करोड ५५ लाख मतदाता हुनेछन् ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र : ३३०
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र : १६५
प्रदेश सभामा समानुपातिक सदस्य : २२०
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सदस्य : ११०
प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष सदस्य : ३३०
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष सदस्य : १६५
जम्मा निर्वाचित प्रतिनिधि : ८२५
मतदाता : करिब एक करोड ५५ लाख
मतदान केन्द्र : करिब २० हजार
मतपत्र : करिब तीन करोड ४० लाख (प्रत्यक्ष र समानुपातिक)
खर्च : १० अर्ब रुपैयाँ
मतपत्र ढुवानीका लागि समय : करिब २० दिन
मतपत्र छाप्ने समय : करिब एक महिना
मतपत्रको प्रकार : दुई
दलित : १३.८
आदिवासी जनजाति : २८.७
खस–आर्य : ३१.२
मधेसी : १५.३
थारू : ६.६
मुस्लिम : ४.४
महिला : ५.०
पिछडिएको क्षेत्र : ४.३
कुन प्रदेशमा कति दल प्रतिस्पर्धी ?
प्रदेश नम्बर १ : ८७
प्रदेश नम्बर २ : ८६
प्रदेश नम्बर ३ : ८६
प्रदेश नम्बर ४ : ८२
प्रदेश नम्बर ५ : ८४
प्रदेश नम्बर ६ : ८२
प्रदेश नम्बर ७ : ८३